Umaki: Hlukanisa i-PDF | Martech Zone
I-Tag: Hlukanisa i-PDF
Kwesinye isikhathi akuwona amabhizinisi amakhulu, ama-mega, amapulatifomu ayinkimbinkimbi enza usuku lwakho. Namuhla sithole isampula elilodwa lesampula kusuka kumklami wethu ebelibukeka limnandi kepha lalingu-12Mb lapho ngiwaguqula abe ngama-PDF. Uma ngikhuluma iqiniso, anginayo nencazelo ethile mayelana nokucindezelwa kwe-PDF ngakho-ke ngaya kuGoogled ukuthola izilungiselelo ezifanele kanye nezifundo. Engikutholile kwakuyigugu - i-smallpdf. Khohlwa izilungiselelo, khohlwa okokufundisa… vele uhudule bese uphonsa ifayela lakho le-PDF futhi